बेहुलीलाई कुरेर बस्नु भनेका किशोरद्वारा आ.त्मह.त्याको प्रयास, साथिले पुर्याए अस्पताल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 19, 2021 AdminLeaveaComment on बेहुलीलाई कुरेर बस्नु भनेका किशोरद्वारा आ.त्मह.त्याको प्रयास, साथिले पुर्याए अस्पताल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
तर सोहि समयमा उता किशोर खतिवडा भने ब्लडप्रेसर हाई भएर ढलिरहेको खुलेको छ । उनलाई उनका साथीहरुले बेलुका मात्र थाहा पाएपछि एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लागिएको छ । पुरा भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस: